စစ်ငြိမ်းအေး - မလွမ်းဘယ်သူ နေပါ့မယ် - MoeMaKa Media
Home / Community / Experience / Sitt Nyein Aye / စစ်ငြိမ်းအေး - မလွမ်းဘယ်သူ နေပါ့မယ်
စစ်ငြိမ်းအေး - မလွမ်းဘယ်သူ နေပါ့မယ်
Community, Experience, Sitt Nyein Aye
- ဪ မရေတွက်ပြီဘု၊ သူ့ပုံတူတွေ ဆွဲခဲ့တယ်။
ပန်းချီ စစ်ငြိမ်းအေး၊ (လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၀ ကျော်က၊ တခုသော ဒေါ်စုပုံတူ။ 36"x 48", 1995, New Delhi )
"သူနဲ့လူချင်း တွေ့ဖူးလား" ( Did you meet with Aung San Suu Kyi in person? )
- အနုရာဒါဒတ်က မေးတယ်။( အင်တာဗျူးနေစဉ်၊)
ဘယ်သူမှ မမေးဖူးတဲ့ အသစ်စက်စက်မေးခွန်း။ စိတ်ကူး လိမ္မာချက်တော့၊ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ၊ စပ်စပ်စုစု၊သူမလို့ မေးတတ်တယ်။ အင်းလေ၊ဒါက သတင်းထောက်၊ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့အလုပ်ကိုး။
" ကြံကြံဖန်ဖန်၊ ဘယ်ကလာ တွေ့ဖူးလိမ့်မလဲ" ( Sorry. Never . I missed her. At that time our lives were on the run ) ။ ၈၈ က အပြေးအလွှား၊ အသဲအသန်ကာလကို ရှင်းပြရတယ်။
"တခုတော့ရှိတယ်၊ သတင်းစာပေါ်မှာတော့ တခါတွေ့ဖူးတယ်။"
( ၈၈ အာဏာမသိမ်းခင်က၊ "အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မန္တလေး လာမည်" ဆိုတာနဲ့ "ပန်းချီစစ်ငြိမ်းအေးရဲ့ အနုပညာလုပ်အား" ဆိုပြီး သတင်းစာတခုမှာ၊ စာလုံးမဲကြီးနဲ့တွဲဖေါ်ပြခဲ့ဖူးတာကို ရည်ညွှန်းလျှက်။) သူပြုံးတယ်။
" ဆွဲခဲ့ပြီးတာတွေ အားလုံးပေါင်းရင်၊ အခု သူ့ပုံတူပန်းချီတွေ ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ -" ( How many of her portrait totally you painted before ?)
" ၈၈နယ်စပ်မှာ တောခိုခဲ့ကတည်းကနေ၊ တောက်လျှောက် ဆွဲလာခဲ့တာဘဲ။ မမှတ်မိနိုင်တော့ဘူး။ အခု ဒီတခန်းထဲမှာ ရှိတာပဲ ရေကြည့်စမ်းပါတော့၊"
သူရေကြည့်တယ်၊အကြီး၊ အသေး၊ ဆွဲလက်စနဲ့ ဆွဲပြီး ... ၁၃-ကား။
" Oh! many " ပခုံးတွန့် မျက်လုံးပင့် အံ့ဩပါ့ဆိုတာမျိုး။
- အနှစ် ၂၀ နီးပါးကြာ၊ ပန်းချီဆိုတဲ့လက်နဲ့ စုတ်ချက်တွေကို၊ ကျည်ဆံတွေနဲ့ တရစပ်ပစ်သလို ဆွဲခဲ့တယ်၊
စစ်အာဏာ ကျဆုံးဖို့အရေး နည်းနည်းကလေးမှ ဘေးမထွက်ခဲ့။
မျှော်လင့်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ၊ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ ဒေါ်စုပုံက အများဆုံး။ အများဆုံးပုံတွေကို ဒေလီမြို့မှာ ဆွဲခဲ့တာမို့ ၊ဒေလီကို ဒေါ်စုလာတယ် ဆိုတော့ ပိုပြီးသတိတရနဲ့ လွမ်းရပြန်သေးသပေါ့။
- အော် ဒါပေမဲ့ "ခုချိန်၊ ငါတို့များ ဒေလီမှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ ဒေါ်စုနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး ၊ ဝမ်းသာအားရ၊တွေ့ကြရမှာဘဲ"လို့တော့ဖြင့် ယောင်လို့တောင်မှ အိပ်မက်မမက်နိုင်၊
- "အောင်ဆန်းစုကြည်" ဆိုတဲ့၊ အမည်နာမကလေး၊ မွေးကာစ၊ လေးဘက်တွားနဲ့ 'ရပ်နိုင်ပေ့' 'ရပ်နိုင်ပေ့' ဘဝက အသက်နဲ့ရင်းပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျေးဇူးရှင်များမှာတောင် သူ့အနား သီလို့တောင်မှ မရစ်နိုင်ကြတော့ဘူးဆိုတော့ကာ၊ 'ဒို့ကတော့' 'ဒို့ကတော့ 'ဝေးရာက ရှား' ရမဲ့အဖြစ် ပါဘဲလား။
- သူ့မှာလည်း ၂ ရက်ထဲ၊ ဖုတ်ပူမီးတိုက်လာရတာ၊ ကြည်လင်မယ် မထင်ပါဘူး။ အရေးထဲ၊ သူ ဒေါသမထိန်းနိုင်လို့၊ ပဝေဏီမိတ်ဆွေကောင်းကြီး ဘင်ရစ်ချပ်ဆင် စုံကန်ထွက်သွားပြီ။
- ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နားလည်အောင်တော့ ကြိုးစားကြည့်ရမှာပါ။
- လွတ်လပ်ရေးရပြီး၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု၊ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တော့ "တစစီဖြစ်နေတဲ့ ကားပျက်ကြီး တက်မောင်းရသလိုဘဲ" တဲ့။
- အခု၊ ဒေါ်စုခမျာမှာလည်း မသထာရေစာ အာဏာကလေး လက်တဆုပ်နဲ့၊ တိုင်းပြည်ကြီးက ဖရီုဖရဲအကွဲကွဲ အပြဲပြဲ ဒီအထဲမှာမှ (ကိုယ့်ကိုယ်ကို) ကယ်တင်ရှင်ကြီးများရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူတည်ဆောက်ထားတဲ့ သံမဏိတံတိုင်းကြီးကို ဖြိုလှဲချရမှာမို့
- တကယ်ပါ၊ သနားပါတယ်၊
သနားလိုက်သမှ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားဖို့တောင် မကျန်တော့ဘူး။
စစ်ငြိမ်းအေး - မလွမ်းဘယ်သူ နေပါ့မယ် Reviewed by MoeMaKa on 9:00 AM Rating: 5